Siyaasadda Cuntada | Rund Foundation - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Siyaasadda cookie
Kukiyada iyo sida ay kuu Faa'iidaystaan
Boggani wuxuu sharxayaa siyaasadda cookie ee "The Reward Foundation". Boggayaga internetka wuxuu isticmaalaa cookies, sida ku dhawaad ​​boggaga oo dhan, si ay kuu caawiyaan sidii aad u heli lahayd khibrada ugu fiican ee aan awoodno. Kukiyada waa faylasha qoraallada yaryar ee lagu rakibo kombiyuutarkaaga ama taleefanka gacanta markaad fiirineyso bogagga shabakadaha. Macluumaadka ay qaadeen cookies maaha shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo, laakiin waxaa loo isticmaali karaa in lagu siiyo khibrad internet oo shakhsi ah. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato isticmaalka guud ee cookies, fadlan booqo Cookiepedia - dhammaan waxyaabaha ku saabsan cookies.
Noociyadayadu waxay inaga caawisaa:
Ka dhig boggayaga inuu u shaqeeyo sidii aad filanaysay
Xasuusnow inta lagu jiro iyo inta u dhaxaysa booqashooyinka
Hagaajinta xawaaraha / ammaanka goobta
U oggolow inaad ku wadaagto bogagga shabakadaha bulshada sida Facebook
Si joogto ah u hagaajiso boggeena internetka
Samee suuqgayaga si tayo fiican leh (ugu dambayntii naga caawiya inaanu bixino adeegga aan ku samayno qiimaha aynnu samayno)
Uma isticmaalno cookies si:
Uruurso macluumaad shakhsi ahaan loo aqoonsan karo (iyada oo aanad ogolaansho rasmi ah)
Uruuri macluumaad kasta oo xasaasi ah (adigoon haysan ogolaansho rasmi ah)
Ku gudbin macluumaadka shabakadaha xayeysiinta
Ku dhaaf macluumaadka shakhsiyadeed ee lagu aqoonsan karo dhinacyada saddexaad
Bixi guddiyada iibka
Waxaad wax badan ka baran kartaa dhammaan cookies ee aan isticmaalno hoos
Waxay na siinaysaa ogolaansho inaad isticmaasho cookies
Haddii goobaha software-ka ee aad isticmaasho si aad u aragtid boggaan (boodhkaagaaga) waa la isku-hagaajiyaa si loo aqbalo kariimka aan sidaan u qaadno, iyo isticmaalkaaga sii wato website-ka, taas oo micnaheedu yahay inaad ku fiican tahay tan. Haddii aad rabto inaad ka saarto ama aanad isticmaalin cookies ee ka jira boggeena waxaad ku baran kartaa sida loo sameeyo sidan hoose, si kastaba ha noqoto sidaas waxay u egtahay macnaheedu in goobta aanu shaqeyneyno sidii aad filayn lahayd.
Naqshadda bogagga Kukiyada: Cuntooyinkeena gaarka ah
Waxaan isticmaalnaa cookies si aan u samayno website-kaan oo ay ka mid yihiin:
Xusuusashada goobahaaga raadinta
Ma jirto siyaabaha looga hortagi karo kakoobyadan oo kale aan loo isticmaalin si aan u isticmaalno boggayaga.
Kukiyada boggaan waxaa dejiya Google Analytics iyo The Foundation Foundation.
Boggayaga, sida shabakadaha badankooda, waxaa ka mid ah waxqabadka ay bixiyaan dhinacyada saddexaad. Tusaale ahaan sida caadiga ah waa fiidiyoowga YouTube. Boggayaga waxaa ku jira kuwan soo socda kuwaas oo isticmaala cookies:
Google (YouTube) - Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Dhibaatada kakoobyadani waxay u badan tahay inay jebiso hawlaha ay bixiyaan dhinacyadan saddexaad
Websaytka Bulshada Cookies
Marka si fudud ayaad 'Like' u wadaagi kartaa ama u wadaagi kartaa waxyaabahayaga ku jira bogagga sida Facebook iyo Twitter waxaan ku soo darnay badhanno wadaagga bartayada.
Kukiyada waxaa lagu dejiyaa:
Saamaynta asturnaanta ee arrintani waxay ku kala duwan tahay shabakadda bulshada ilaa shabakadda bulshada waxayna ku xirnaan doontaa goobaha asturnaanta ee aad dooratay shabakadahaas.
Kombiyuutarada Tirakoobka Qarsoodiga ah
Waxaan u adeegsanaa cookies si loo soo ururiyo tirakoobka booqdayaasha sida imisa qof ay soo booqdeen boggayaga internetka, nooca farsamada ay isticmaalayaan (tusaale waxay ku bixiyaan goobta, bogagga ay fiiriyaan iwm. Tani waxay naga caawinaysaa inaan si joogto ah u hagaajino degelkeenna. Kuwaas oo loogu yeero 'falanqeyn' ?? barnaamijyadu sidoo kale waxay noo sheegaan, si qarsoodi ah, sida dadku ku soo gaadheen degelkan (tusaale ahaan mashiinka wax lagu raadiyo) iyo inay halkan joogeen ka hor intaysan naga caawin inaynu go'aamino waxyaabaha ugu caansan.
Google Analytics. Waxaad ka heli kartaa wax badan oo iyaga ku saabsan halkan.
Waxaan sidoo kale u adeegsanaa 'Google Analytics' Demographics-ka Dembi-baarista iyo Xiisaha, kaasoo na siinaya aragti qarsoon oo ku saabsan da'da-da iyo danaha booqdayaasha bartayada. Waxaan u adeegsan karnaa xogtaan si aan u horumarino adeegyadeena iyo / ama waxa ku jira.
Kufsiyada Kaga baxsan
Waxaad badiyaa badali kartaa kariimka adigoo hagaajinaya goobahaaga biraawsarka si aad u joojiso aqbalitaanka cookies (Baro sida halkan). Si kastaba ha noqotee inaad sidaas sameyso waxay u badan tahay inay xaddido waxqabadka annaga iyo qayb weyn oo ka mid ah bogagga internetka, maaddaama cookies-ku yihiin qayb caadi ah oo ka mid ah websaydhada ugu casrisan
Waxay noqon kartaa inaad ka walwalsan tahay agagaaraha buskudku waxay la xiriiraan waxa loogu yeero "spyware". Halkii laga damin lahaa cookies-ka ku jira biraawsarkaaga waxaa laga yaabaa inaad ogaato in software-ka anti-spyware-ka uu gaaro isla ujeeddadaas adoo si toos ah u tirtiraya cookies-ka loo tixgelinayo inuu yahay mid duulaan ah Wax badan ka baro Maareynta Kukiyada leh Software Software.
Qoraalka macluumaadka macluumaadka cookie ee ku yaal boggan waxaa laga soo qaatay qodobbadii ay bixisay Suuqa Internetka ee Attacat http://www.attacat.co.uk/, oo ah hay'ad suuq geyn ah oo fadhigeedu yahay Edinburgh. Haddii aad ubaahan tahay macluumaad la mid ah website-kaaga waxaad isticmaali kartaa qalab baaritaan cookie ah oo bilaash ah.
Haddii aad isticmaashay a Ha la socon xayeysiiska browser, waxaan u qaadaneynaa calaamada aadan rabin inaad u oggolaato kuwan cookies, waana la xiri doonaa. Kuwani waa goobaha aan xannibeyno: